अव्यवस्थित शहरीकरणलाई कसरी ब्यवस्थित गर्ने ? - NepalTimes
अव्यवस्थित शहरीकरणलाई कसरी ब्यवस्थित गर्ने ?
पुजा बेल्बासे, २२ चैत, काठमाडौं ।
शहर भन्ने बित्तिकै हरेक दृष्टिकोणबाट सुविधा सम्पन्न भन्ने बुझिन्छ । जहाँ कुनै कुराको असुविधा हुने छैन । अनि शहरीकरण भनेको जहाँ शहर भइसकेको छ त्यहाँको बस्ती बिकास हो । गाउँबाट सेवासुविधा खोज्दै मानिसहरु सबै शहर तिर बसाई सराई गरी आएका छन् । यो क्रम वर्षाै देखि जारी छ । जति अस्थायी रुपमा शहर पस्दछन् त्यही हाराहारीमा स्थायी रुपमा बसाईसराई गरी शहर पस्नेहरु छन् । संघीयतापछि यो अवस्थामा केही परिर्वतन देखिएको छ ।
गाँउ गाँउमा सरकार र केही सुविधा पुगेपछि बसाई सराईमा केही कमी आएपनि यो रोकिएको भने छैन् । यो परिपाटीले ग्रामीण क्षेत्र घट्दो बसोबास र समाजको बाटोमा छ भने शहरमा दिनप्रतिदिन अब्यवस्थित शहरीकरणले समस्या थपिदै गएको छ ।
अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारीका अनुसार नेपालको कुल जनसख्या मध्ये २० देखि २१ प्रतिशत मानिस शहरी जीवनमा छन् । मानिसहरुको दिमागमै हामी शहरमा बस्नै पर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ यसले गर्दा शहरीकरण झन झन बढदै गएको छ ।
पछिल्लो समय त झन सरकारले नै नयाँ शहरहरुको विकास गरिरहेको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक विषय त हो ।तर शहरीकरण बढदै गर्दा नकारात्मक असरहरु पनि धेरै परेका छन् । शहरीकरण बढदै जादाँ अपराध पनि उत्तिकै बढदै गएको छ । यसको प्रभाव शिक्षा, स्वस्थ्य , रोजगारी जस्ता विभिन्न क्षेत्रहरुमा परेको छ ।
अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण २१ प्रतिशत गरीबी पुगेको अधिकारीले बताए । अधिकारीका अनुसार अव्यवस्थित शहरीकरण तात्कालीन रुपमा सामान्य प्रक्रिया झै देखिए पनि दीर्घकालीन रुपमा विकराल समस्याको पोको हो । नेपालका शहरहरु अव्यवस्थित रहेकाले यसलाई व्यवस्थित बनाउनमा गम्भीर हुनुपर्ने अधिकारीको ठहर छ ।
अधिकारी भन्छन् केन्द्रमा रहन खोज्ने प्रबृतिले देशका मुख्य शहर र राजधानीमा चाप बढाएको छ । देश संघीयतामा गएसंगै केन्द्रको अधिकार समेत बाँडफाँड भएको छ । यस्तोमा शहरी क्षेत्रको जनघनत्वलाई व्यवस्थापन गर्ने र अव्यवस्थित शहरी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने राम्रो मौका हुन सक्छ । तर सरकार मौन बसिरहेकोे छ ।
बातावरणविद् शिलशिला आचार्यका अनुसार अव्यवस्थित र अनियन्त्रित अनि योजनाविहीन शहरीकरणले शहरी सम्पदा र प्राकृतिक सुन्दरतामा असर पुर्याइरहेको छ । शहरीकरणको गतिसँगै प्राकृतिक सम्पदा नाश हुन नदिई शहरी जनसंख्यालाई सोही क्षेत्रका स्रोत र साधन तथा पूर्वाधारले वहन गर्न सके मात्र त्यसले फाइदा पु¥याउँछ । तर हाम्रो सन्दर्भमा यो ठीक विपरीत देखिन्छ । जसका कारण शहरीकरणले फाइदा भन्दा बेफाइदालाई निम्त्याइरहेको छ ।
आचार्यका अनुसार शहरीकरण अव्यवस्थित बन्दै जादाँ वायु प्रदुषण, जलप्रदुषणमा समेत बढ्न गएको छ । यसैका कारण जनसख्या बढदै गएको छ भने बेरोजागरी र गरिबीसँगै यातायात देखि ट्रफिक व्यवस्थापनमा समेत चूनौती देखिएको छ ।
यो चुनौतीलाई राष्ट्रिय योजना आयोग, सरोकारवाला निकाय र सरकारले दीर्घकालीन योजनाका साथ चिर्नुपर्दछ । यसैले अव्यवस्थित शहरीकरणलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले नै पहिलो भुमिका खेल्नु पर्ने देखिन्छ ।